Ubudlelwane nomyeni emva kokuzalwa komntwana
Nantoni na into ongayithethayo, kwaye unyaka wesibini nowesithathu wobomi bentsapho enomntwana kunzima kakhulu kuzo zonke iziganeko. Umntwana usele uhamba kakuhle, uthi. Kuyakubonakala ngathi, nantsi ke - zonke iingxaki sele zishiye emva, kwaye ngoku unokuphumla ngokukhuselekileyo, khumbula ukuba ngaphezu komntwana usenayo indoda / umfazi kwaye uvelise umlambo omtsha ebomini bakho. Kodwa kuvela ukuba akukho nto iphuma ... Kutheni oku kwenzekayo? Masizame ukuyifumanisa.
Okokuqala, ngeendlela ezininzi umfazi akalungile. Emva kokubeleka kwaye ngexesha lokunyamezela, unokungalingani kwamangqamuzana, okukhokelela ekuqhubeni ngokukhawuleza kwemizwa. Kancinci, umfazi uqala ukuphuka kumyeni wakhe (kunjalo, kuyo, kungekhona kumntwana?). Yonke into ayithandayo kwaye ithande umama omncinci idilesi, kwaye uyise akafumani, njengomthetho, akukho nto. Okanye bafumana kuphela izihlamba kuzo zonke izono ezifa. Ngaphinda emva komsebenzi, ndilibalekile! "," Awunandaba nam kunye nosana! "," Ndiyathuthunyiswa ukususela ekuseni kuze kube sebusuku, kodwa awuyiqondi! "Njalo njalo. Ungaqhubeka ngonaphakade.
Ukuba unyaka wokuqala wobomi bomntwana wengane unomdla okwaneleyo, oku akunakutsholwa ngomnyaka wesibini nowesithathu. Kubonakala kwindoda ukuba iyadingeka kwintsapho kuphela njengomthombo wemali engenayo. Uziva elahliwe, eshiywe kwaye engaswelekanga. Ewe, kuba umfazi wakhe akanakho ixesha kunye namandla okuthetha naye, akuyikumangalisi, kuba akanakho ukubonakala, ngaphezu komntwana nobomi. Ukongezelela, udangelekile ukuba indoda yakhe ayincede.
Umfazi naye uvakalelwa kukuba akanakonwabisekanga, akanakunconywa. Ukususela kule nto, ukhangeleka ngakumbi kwi-crumb ukufumana induduzo ekunyamekeleni kwakhe ("kuye ubuncinane kunomvuzo!", Ucinga).
Xa intsapho ikhula imeko enjalo yokungafuneki kwemfuno yomntu womntu womtshato, iya kuba ngumhlaba opheleleyo wokuxabana, ukuxabana, ukupholisa, ukutshatyalaliswa, ukwahlukanisa ...
Umfazi uzama ukuzinikela kumntwana, ezama ukukhupha yonke into enqwenela ngayo intuitively aze alahle onke amandla akhe ekukhuliseni kwakhe. Ngelo xesha, umnqweno womama unye: ukuba umncinane wakhe ujabule. Kodwa intsana ingonwabile kuphela kwintsapho apho uthando lukayise nomama luthandana. Ukuba abatshatileyo bahlala omnye "umama" kunye "noyise", ukuvisisana kwintsapho kuphulwa.
Ngokwemvelo, unina, ingakumbi ukuba uyondla umntwana, kunzima ukutshintshe umntwana usuke kumyeni wakhe. Wayesetyenzisiwe kumntwana kunye nomntwana, kwaye yiyiphi ingxaki ayengayi kuba nayo, kusekho lula kuye. Yaye ubudlelwane nomyeni wakhe - oku kunzima kakhulu. Ewe, kwaye ukungabi nako kokulala komama kunendima enkulu: umfazi nje akanalo amandla kunye nesifiso santoni na, ufuna nje ukulala ...
Kwaye ke, imihla ngemihla, umgama phakathi komntu nomfazi, bathandeke kakhulu kwabanye abantu, ukwanda. Ukongezelela, ibhinqa, ngenxa yokutshintsha kwe-hormones emzimbeni, iyakwazi ukubona iimeko ezininzi ngokungenakufaneleka, ukuthatha zonke iimeko ezingalunganga kwiindleko zakho.
Ukuba ubona ukuba usapho lwakho luza ngegama elithi "waya kumntwana, kwaye waya emsebenzini," ngoko kufuneka ufune ukwenza into ethile ngokukhawuleza. Cinga: emva koko, bekukho uhlobo oluthile lokugcina ubuhlobo bakho ngaphambi kokuzalwa komntwana? Wena, emva kwakho konke, ngabahlobo abaqhelekileyo, iimfuno, iimpawu? Ngoko yintoni umcimbi? Emva kwakho konke, uhlala unabantu abathandayo omnye komnye, kwintsapho oye waba ngumntu omnye. Kukho ubukho bentsapho obuqhelekileyo, ibhokisi yebhondi yezihloko eziqhelekileyo ezithandekayo kunye nokuzimela kufuneka zizaliswe zonke ixesha. Awukwazi ukuhlala isigxina kwimimiselo edlulileyo, kungekudala okanye emva koko uza kudinwa, kwaye akwanele. Ngendlela, kwaye umntwana makangasetyenziselwa ukuba ngumntwana omncinci kangangokuthi yonke into ijikeleza kuye-ngoko ikhula. Awufuni oko, akunjalo?
Ukuba konke oku ngasentla kufanelana nesimo kwintsapho yakho - musa ukuhlala, kwaye wenze. Makhe umyeni ancede kumntwana kunye nendlu, ngoko uya kuba nexesha lomyeni wakho. Ukuphazamiseka kumntwana, ngokuphindaphindiweyo ushiye i-grandmothers, kwaye bahamba kunye kunye. Into ephambili yindlela efanelekileyo kunye nokungabikho kokukhawuleza kwinxalenye yomfazi nomyeni. Uya kubona, ukuba uthatha amanyathelo ukuya kwelinye nelinye, iqhwa phakathi kwakho liya kuqala ukuncibilika!
Ndiyathanda, ukuba nonke nilungile!
Ubudlelwane nomfana oncinci kunentombazana
Indlela yokuziphatha nomntu onqabileyo
Nguwuphi uhluko phakathi kweminyaka kunye nendoda eqhelekileyo
Abalandeli abanamandla "inyaniso ebunzini"
Ihlobo, ilanga, ulwandle, ulwandle
Ukuba umntu uzisa izihlobo zakhe nabahlobo bakhe
U-Elton John wamangalelwa ngokuxhatshazwa ngokwesondo
Iindlela zokunciphisa ubunzima: i-kefir kunye nesinamoni
Ukukhulelwa ngamawele: iimpawu, iifoto, indlela yokuchonga
Ukuhlamba umntwana: Iingcebiso
Kutheni kungekho mntu ofuna ukukhula?
Indlela yokwenza umntu agcine izithembiso zakhe
Umthwalo wokuqeqesha esikolweni
Isonka sePatato nenyosi yenkukhu
Ngaba iintsana zihlala nezilwanyana